अब मलेसियामा कार्यरत श्रमिकले मलेसियाका बैंकबाट ऋण पाउने, कतिसम्म पाइन्छ ? - ramechhapkhabar.com
अब मलेसियामा कार्यरत श्रमिकले मलेसियाका बैंकबाट ऋण पाउने, कतिसम्म पाइन्छ ?
मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरुले मलेसियाका बैंकबाट ऋण लाउने ब्यवस्था गर्न लागेको छ । मलेसियाको बित्त मन्त्रालयले सो कुराको ड्राफ्ट तयार गर्दै सोको जानकारी दिएको स्थानीय समाचार संस्थाले जनाएको छ । युएई लगायतका देशहरूमा त्यस देशमा काम गर्ने बिदेशी कामदार तथा नागरिकलाई ऋण दिने ब्यवस्था भए पनि मलेसियामा त्यस्तो ब्यवस्था अझै छैन ।
त्यसैको कमि पूरा गर्न अब मलेसियामा कार्यरत जो कसैले पनि उसको तलबको आधारमा ऋण पाउने ब्यवस्था गर्न थालेको हो । मन्त्रालयले अझैसम्म के कति तलब हुनेले ऋण लिन पाउने हुन् त्यो भने खुलाइएको छैन । कम्तिमा पनि मलेसियामा कार्यरत ब्याक्तीको तलब कम्तिमा2हजार वा 25 सय रिंगेट वा सो भन्दा बढी हुनुपर्ने नियम लगाउन सक्ने बताइएको छ ।
यदि मलेसियामा काम गर्ने जो कोहिले पनि आधिकतम रकम निश्चित समयावधि सम्मको लागी ऋण पाउने ब्यवस्था हुन सके कामदारलाई लाभ हुने बुझिएको छ । युएई लगायतका देशमा कयौं बर्ष अगाडी देखि त्यस्तो ब्यवस्था भए पनि मलेसियामा भने त्यसो ब्यवस्था अझै सम्म सुबिधा छैन ।
अबदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट
वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालयले आँउदो जेठ ६ गते देखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
कार्यालयले २०७८ माघ २ गतेदेखि पुन : श्रम स्वीकृति र २०७९ वैशाख २ गते देखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र गरेसँगै कार्यालयमा दैनिक हुने हजारौको भीड हटेको छ। हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाईनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवाप्रवाह गर्ने भएको छ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो छरितो रुपमा गुनासो रहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन गरेसँगै सबै किसिमका श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए।
वैधानिकीकरण मार्फत दिने गरिएको श्रम स्वीकृतिलाई व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सरह श्रम स्वीकृति दिने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएकोले अब वैधानिकीकरण मार्फत श्रम स्वीकृति नहुने तर सो प्रकृतिका काम नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट हुने कार्यालयले जनाएको छ।